Krismasim-pahatoniana | NewsMada
Herinandro sisa, ho tonga ny andro Krismasy. Fotoana hanamarihana ny nahaterahan’ny Mpamonjy ho an’ny kristianina, ho an’ny mino an’izany, satria misy tokoa ireo tsy mino. Finoana sy safidy izany fa tsy iadian-kevitra. Fa ankilany kosa, fotoana tokony hihavanana, hifamelana raha tena vokatry ny fo tokoa anefa. Toa manalasala ihany izany raha tarafina amin’ireo zava-mitranga etsy sy eroa. Mifandroritra ny parlemanta roa, mifanenjana amin’ny fanjakana ny mpianatra sy ny mpampianatra (Seces) eny amin’ny oniversite, mitaky ny hijerena ny tombontsoany ny sendikan’ny mpampianatra Sempama. Mandritra izany, tsy mety voavaha, efa aman-taony, ny olan’ny rano ho an’ny mpanjifa eto Antananarivo sy ny manodidina. Manampy trotraka ny fahatapahan-jiro maharitra. Efa hatry ny ela no tsy manana asa ny maro anisa amin’ny Malagasy ka voatery lasa mivarotra amoron-dalana.
Tsy midika fa tsy misy voavaha ny olana fa tena misy ny zava-bita. Efa am-perinasa ny kamiaobe miisa 20 mandraoka ny fako eto an-dRenivohitra. Madiva ho vita ny lalana, mafy sady mateza. Tsy mihetsika firy ny vidim-bary na ao anatin’ny maitsoahitra aza isika. Nahazo fitaovana ny mpianatra, sns.
Raha tena olon’ny fifamelana sy ny fifandeferana tokoa, mitonona fa “kristianina”, olon’ny “fitiavana”, sady Malagasy, olon’ny “fihavanana”, voambolana tsy saro-pantarina ny “fahatoniana”. Tsy mifangaro ny finoana sy ny politika, na ny raharaham-pirenena, na ny sosialim-bahoaka, na ny fihariana ankapobeny. Adidy, tsy maintsy hatao, ny an’ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Aoka kosa mba hianoka amin’ny Krisimasy ankalazaina am-pahatoniana sy hiatrika ny faran’ny taona am-pifaliana ny tsirairay.